Grèce Mpifindra monina 6 no maty an-dranomasina
Mpifindra monina enina no maty nalentiky ny ranomasina ary olona 57 no avotra ny ainy omaly maraina, tany Lesbos Grèce.
Mpitsoa-ponenana syrianina izy ireo ary anisan`ireo niaina tamin’ireo trano kely 70.000 tafo izay noteren’ny fanjakana Gresy noravana tamin’ny herinandro lasa teo. Fantatra kosa fa sambo mpiaro avy amin’ny Vondrona Eoropeanina no nandray an-tanana ny famonjena azy ireo. Araka ny tatitry ny minisiteran’ny mponina grika kosa dia nilaza fa maro be ireo mpifindra monina tamin’ity taona ity no maty natelin’ny ranomasina mediteraneanina. Hatreto, tsy fantatra ny fototry ny loza hatreto,saingy efa misokatra ny fanadihadiana.